I-BELLEVUE SEO NOKUSESHA KWENKQUBO YOKWENZA UKUSETSHENZISWA
Umeluleki we-Bellevue SEO
Uma ibhizinisi lakho lasendaweni lingekho ekhasini lokuqala le-Google, izimbangi zakho zithatha ngaphezu kwamakhasimende akho angama-85%.
Uma ungumnikazi webhizinisi lendawo, usuvele uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukulinganisa imiphumela yosesho lwasendaweni. Manje njengoba i-intanethi isibe ngumthombo oyinhloko abathengi abaphendukela kuyo ukuthola imininingwane yendawo yebhizinisi, ukungabonakali kusesho lwasekhaya kufana nokuthi akukho ku-inthanethi.
Usesho lwasendaweni lubangela u-50% wabaseshi beselula ukuthi bavakashele amabhizinisi endawo kungakapheli izinsuku. Okubaluleke kakhulu ukuthi iGoogle isishintshe i-algorithm yokusesha ukuze inikeze amazinga aphezulu kumawebhusayithi enzelwe omakhalekhukhwini.
Ama-96% wabasebenzisi basebenzisa i-inthanethi lapho becwaninga ngemikhiqizo nezinsizakalo zendawo.
Ama-94% wabo bonke abasebenzisi be-smartphone bafune imininingwane yasendaweni.
Ukuba newebhusayithi yebhizinisi lakho kubalulekile, kepha iwebhusayithi yakho idinga ukwenziwa ilungele lokho okuseshwa amakhasimende akho asendaweni. Abathengi abangama-36% bathi iwebhusayithi eklanywe kahle inika ibhizinisi lendawo ukuthembeka okwengeziwe.
Amaphesenti angama-32% wabathengi kungenzeka ukuthi axhumane nebhizinisi lendawo uma enewebhusayithi.
Ukusesha okungama-98% kukhetha ibhizinisi elisekhasini elilodwa lemiphumela abayitholayo.
Amaphesenti angama-88% wabathengi abheka ukubuyekezwa okuku-inthanethi ngaphambi kokuthenga izinsizakalo zasendaweni
The I-Google 3-Pack ivela endaweni ephezulu kuma-93% osesho ngenhloso yendawo. Njengoba iGoogle inciphise izindawo eziphezulu kusuka kweziyisikhombisa kuya kwezintathu kubalulekile ukuthi ibhizinisi lakho lasendaweni lenzelwe i-SEO ukufinyelela lezo zindawo ezifiselekayo.
Ucwaningo lweGoogle emaphethini osesho lwasendaweni luveza ukuthi abaseshi bendawo bakulungele ukuthatha isinyathelo. Ngokwalokho abakutholile, “abathengi abangama-50% abaqale ukusesha kwendawo ku-smartphone yabo bavakashele isitolo kungakapheli usuku olulodwa, kanti abangu-34% abasesha kwikhompyutha / kuthebhulethi nabo benze okufanayo.” Lokhu kukhombisa ubudlelwano obuqondile obusezingeni lokusesha kwasendaweni obune-traffic yasesitolo.
Ngokusho kocwaningo olwenziwa ngu Chitika, Abaphenyi abangama-91 bakhetha ibhizinisi elisekhasini elilodwa lemiphumela yosesho. Ngokwengeziwe, isikhundla sokuqala semvelo ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha sithola amaphesenti angama-33 akho konke ukuchofoza.
isenselogic.com inolwazi lweminyaka ekusizeni amabhizinisi amancane nge ukumaketha oku-inthanethi nokubonisana nge-SEO. Silapha ukusiza ibhizinisi lakho liphumelele. Xhumana nathi namuhla ukuthola ukuhlolwa kwamawebhusayithi kwe-SEO kwamahhala nokuseshwa kwamagama asemqoka ngebhizinisi lakho elithile. Imisebenzi yethu iqinisekisiwe. Uma unganelisekile ngokugcwele sizobuyisa noma iyiphi inkokhelo futhi ungakhansela izinsizakalo zethu.
Iphromoshini ekhethekile: Njalo ngenyanga sizokwenza izinsizakalo zamahhala ze-Bellevue SEO zamabhizinisi endawo ayi-10 inyanga eyodwa ngegama elilodwa elingukhiye kanye nokwenza okukodwa ekhasini. Uma ungahlatshwa umxhwele ngokuphelele yimiphumela yethu awukhokhi. Ayikho imali engaphambili noma inkontileka yokusayina.
Amanani wecebo le-SEO or
Ukuhlolwa kwamahhala kwamawebhusayithi